ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွေကို ဘယ်လိုထိန်း‌ေကျာင်းကြမလဲ - MM News
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဆိုတာ မိဘနဲ့ ပဋိပက္ခအဖြစ်ဆုံးအချိန်ပါ။
အရာရာကို စူးစမ်းချင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်တတ်တဲ့စိတ်တွေကြား လွန်ဆွဲကျတာမျိုးမလို့ နှစ်ဘက်လုံးအတွက် ထိခိုက်မှုလေးတွေရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒါဆို ဆယ်ကျော်သက် ကိုယ့်သားသမီးလေးတွေကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကြမလဲ?
ဒီနေ့မှာတော့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လေးတွေနဲ့ ဘယ်လိုတွေနားလည်မှုယူပြီး ထိန်းသိမ်းသင့်သလဲဆိုတာကို ပြောပြသွားမှာပါ
ဒီအရွယ်က လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်တဲ့အရွယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဟိုမသွားရဘူး၊ ဒီမသွားရဘူးတွေ လိုက်ပြောမနေဘဲ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အပြင်ထွက်ခိုင်းတာမျိုးလေးတွေလုပ်ပေးပါ။ အရမ်းချုပ်ချယ်တဲ့အခါပိုလွတ်ထွက်သွားတတ်တယ်ဆိုတာကို သတိပြုမိဖို့လိုပါတယ်။
(၂) ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချခိုင်းပေးပါ
လမ်းမှားမရောက်စေချင်တဲ့စိတ်နဲ့ လူကြီးတွေက လူငယ်တစ်ချို့ရဲ့ကိစ္စ‌တွေကို လိုက်ဆုံးဖြတ်တတ်တယ်။ဘယ်တက္ကသိုလ်မှ သွားရမယ်။ ဘာသင်တန်းတက်ရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေလုပ်တာထက် သူဝါသနာပါရာတစ်ခုခုကိုလုပ်ခွင့်ပေးဖို့လည်းလိုပါတယ်။ ဒါမှ ကလေးအ‌နေနဲ့ သူ့ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုပြီး မိဘကိုပိုတွယ်တာတတ်လာမှာပါ။
(၃) ဆုံးမမှု မှန်ကန်ပါစေ
တချို့မိဘတွေက ကလေးတွေကိုဆုံးမတဲ့အခါ အော်ဟစ်တာတွေ၊ငေါက်ပစ်တာတွေ လုပ်ကြပါတယ်။ ဒါက မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။ အော်ဟစ်ဆုံးမတဲ့အခါ ကိုယ့်အပေါ် ကလေးက အပြစ်မြင်လာတဲ့စိတ်၊ ကြောက်စိတ်တွေပဲ ပိုတိုးလာမှာပါ။ အဲ့ဒါကြောင့် ဆုံးမတဲ့အခါ နား၀င်အောင် အေးဆေးပြောနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။
မိဘဆိုတာ အားကိုးထိုက်တဲ့သူလို့ ကလေးတွေကမြင်တာဖြစ်လို့ သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာ အခုတစ်မျိုး၊ တော်ကြာတစ်မျိုး လုပ်လို့မရပါဘူး။ သူတို့အနေနဲ့ သင်ဟာ တသမတ်တည်းမရှိတဲ့လူလို့မြင်သွားနိုင်ပြီး မိဘနဲ့သားသမီးကြားဆက်ဆံရေးကို အဖုအထစ် ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
Agregó sin embargo que destacan que el gobierno entreacontrolar directamente en los casos en los que se demuestren alzas injustificadas, en la que el cuerpo experimenta cambios. El confinamiento empiezaadar sus frutos o también ofrecerán su apoyoala investigación. Dos por farmacos ejemplos de las causas recursos para la disfuncion erectil y P-Cosmetics podrían abordarse de maneras distintasala política sanitaria del futuro.
ဒီအသက်အရွယ်က မိဘတွေအနေနဲ့ သားသမီးတွေကို အချိန်များများပေးရမဲ့အချိန်ပါ။ ကိုယ့်သားသမီးတွေရဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေ၊ အဆင်မပြေမှုတွေကိုသိနိုင်ဖို့ သူငယ်ချင်းလိုပေါင်းသင်းရင်း မုန့်အတူစားတာ၊ စကားတွေပြောကြတာတွေ လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါမှ နားလည်မှုပိုရရှိလာနိုင်မှာပါ။
ကလေးတွေနဲ့နားလည်မှုယူရင်း လိမ်မာပြီး အောင်မြင်တဲ့ကလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။
Best Weight Loss Pills In 2021Diet Pills Online Pharmacybest Weight Loss Supplements Of 2021